Isco oo markii ugu horeysay ka hadlay dib ugu soo laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Isco oo markii ugu horeysay ka hadlay dib ugu soo laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid
Dajiye March 15, 2019
(Real Madrid) 15 Maarso 2019. Xidiga khadka dhexe ee reer Spain ee Francisco Isco ayaa wuxuu ka hadlay dib ugu soo laabashada Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid, kadib markii uu noqday badalka Santiago Solari.
Santiago Solari ayaa laga ceyriyay shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid, kadib guuldaradii kaga soo gaartay kooxda Ajax kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League.
Hadaba wargeyska “Marca” ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Francisco Isco, kaasoo uu kaga hadlay dareenkiisa dib u soo laabashada Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid.
“Dhamaanteen waan ognahay sida uu ahaa Zidane ciyaaryahan iyo tababare ahaanba, soo laabashadiisa waa hadal aad ugu wanaagsan qof walba ee kooxda ku sugan”.
“Wuxuu jecel yahay kooxda Real Madrid, wuxuuna sidaas ku xaqiijiyay go’aankan uu gaaray”.
“Waxaan rajo wanaagsan ka qabnaa Real Madrid, waa inaan hada wixii ka dambeeya u dagaalanaa tartamada oo dhan, sanadkan ma uusan ahayn mid inoo wanaagsan”.
“Laakiin laga bilaabo xiligan wxaan ka shaqeeneynaa sida aan ku noqon lahayn meesha ay taariikhda kooxdan u qalanto, waxaana ku qasbanahay inaan si xoogan u soo celino”.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan wada guuleysano 11-ka kulan ee inooga harsan xili ciyaareedka, inaan dib ugu soo laabano horyaalka waa arin aad u adag, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysano dhibcaha ugu macquulsan”.
“Isbeddelkuna wuxuu ka bilaaban doonaa maanta, laga bilaabo hadda, waxaan u baahanahay garab istaaga taageerayaasha”.
SAWIRRO+MUUQAAL: Iwobi oo Xalay ku kacay fal fool xun oo aad looga yaq-yaqsado!!
Wakiillo ka socda Real Madrid oo ku sugan London si ay heshiis ula gaaraan Eden Hazard